Kusukela ngosuku olujabulisayo lapho ingane ivele khona emndenini, indlela yokuphila yawo wonke amalungu ayo ishintshile ngendlela ephawulekayo nangokwedlulele. Manje zonke izenzo zenzelwe ukuqinisekisa ukuthi ingane ikhululekile kuleli zwe elisha kuye. Kodwa-ke, ngisho nokunakekelwa okungcono kakhulu, kunenkinga enjalo njengenkinga ebusweni bomntwana. Isizathu salokhu akusobala ngaso sonke isikhathi.
Esibelethweni sikamama, isikhumba somntwana sihlale sithintana namanzi, futhi izinguquko eziye zaholela ekushintsheni emsebenzini wezinhlayiya ze-sebaceous and sweat. Ngenxa yalokho, izibhamu zivela ebusweni bomntwana. Izimbangela nezinhlobo zama-pimples zingahluka. Uma kwenzeka ubaqaphela ezinsukwini zokuqala ezingu-3-4 zokuphila komntanakho, kungumuthi wamabele.
Isizathu sokwehlela kwabo kuwukuvimbela amathanga ahlambalaza, okubangelwa ukuthi ukusebenza komgogodla sekuqalile kakade, futhi umkhiqizo awukakakhi, umphumela yizimpumputhe ezimhlophe ebusweni bentsana, ezingenayo izimpawu zokuvuvukala. Ezimweni eziningi, zivela ebusweni bomntwana. Akumniki lutho oluphazamisayo, ngoba aluhambisani nokushaya.
Noma yiluphi ukwelashwa kuleli cala aludingekile, ngaphandle kokunakekelwa nsuku zonke kwesikhumba sombuso wengane. I-Milia izodlula yodwa, ngokushesha nje lapho imbangela yokubukeka kwayo iphela: izimbiza ezizimele ziyobunjwa ngokuphelele. Ukusiza ingane ukuyiqeda akunakwenzeka. Ama-pimples ebusweni bomntwana angaba nokuvuvukala. Le-acne, noma, njengoba kubizwa, i-acne.
Ngokuvamile kaningi kubonakala ebusweni, kodwa ukubukeka kwazo kunoma iyiphi enye ingxenye yomzimba akukhipha. Ziyizimpungushe ezimhlophe, zizungezwe i-corolla evuthayo, futhi zingase zenzeke ngaphansi kobuciko bezinwele noma i- sebaceous gland. Okudingekayo kuqala yiziqhuma ze-hormone ezenzeka emzimbeni womntwana.
Kulesi simo, isikhumba sidinga ukunakekelwa okuningiliziwe. Ekugezeni kungenzeka ukufaka ukumnika kwe-turn or camomile. Kubalulekile ukubonana nodokotela uma ukusakazeka kwezibungu phezu kwesikhumba kuyashesha. Uma ama-acne nama-milies abonakala kuzo zonke izingane, khona-ke icala lelicala lihluke ngokuphelele.
Lokhu kubangelwa ukujuluka nokugcoba okukhulu. Uma emaphethweni ngemuva kwesikhumba esibomvu somntwana kubonakala izinhlanzi eziningi ezibomvu, khona-ke lokhu kuyithuthumela. Ukuze badlule, kufanele ulandele yonke imithetho yokunakekelwa kwesikhumba. Le ndawo iphathwa nge-powder ukuze isindise ngokushesha ingane kusuka enkingeni enjalo.
Ukuhlaselwa kwezingane ezibangelwa ukwelashwa kubonakala ngenxa yezinto eziphilayo ezingekho esimweni esihle, ukutholakala kwamadayi ekudleni komama, izidakamizwa kanye nabaningi bayakwazi nokusebenzisa ukudla okuningi okumnandi. Ngokuvamile lezi zinduna ziyingcosana futhi zisakaze ngemuva kanye nesisu somntwana. Iningi lalo liphazamisa uhlaka oluqinile.
Ngemva kokuhlolwa, udokotela ubeka ukwelashwa okuthile. Uma kwenzeka ukungezwani komzimba kubonakala ebusweni bomntwana obeletha, umama udinga ukubuyekezwa kokudla kwakhe futhi akhiphe amaswidi nemikhiqizo engabangela ukugula. Uma ukunakekelwa kwengane kuhlelwe ngokuvumelana nayo yonke imithetho eyamukelekile, izinkinga ezingenhla zingagwenywa.
Ungasula kanjani amehlo omntwana, nokuthi ungayenza kanjani kahle?
I-arithmetic yengqondo - amathuba amasha wengane yakho!
Rash enganeni: yini okufanele uyenze?
Ukuthuthukiswa kwengane ezinyangeni ezingu-7.
I-Zirtek yezingane - umsizi onokwethenjelwa ekwelapheni kwemithi
Rolls ne jam: zokupheka bhisikidi baking imvubelo
"D Panthenol": yokusetshenziswa
Cool isipho loNyaka Omusha (imibono engavamile)
I imfashini kakhulu abesifazane jackets for Spring-Summer 2013